Tonizia: Niteraka Fitroarana Ny Fanorohana ny Tanan’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2012 10:23 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, عربي, Français, Español, English
Fanafintohinana, fahatezerana, ary fahasosorana; izany no tsapan’ny mpiserasera Toniziana raha nahita ilay lahatsary tao amin’ny Youtube mampiseho lehilahy manoroka ny tananan’ny filoha Moncef Marzouki tamin’ny 26 Aprily. Ahitana an’i Marzouki mitsidika tampoka tsenam-bahoaka ny lahatsary. Raha vao niditra tao an-tsena izy, nihiaka ny sasany tamin’ireo olona tao hoe “Ho ela velona ny filoha”, sy hoe “Ho ela velona i Marzouki”. Lehilahy roa kosa no nanoroka ny tanany raha nandray ny tanan’ireo olona miasa ao an-tsena izy. Nampahatsiahy ny fanorohana tanana nandritra ny fitondran’i Zine El Abidine Ben Ali, ary noheverina ho toy ny fanoherana ny lanjan’ny vanim-potoana taorian'ny fitroarana tao Tonizia.
Ny fiadidian’ny presidanza Toniziana no namoaka voalohany ny lahatsary mampiady hevitra tao amin’ny fantsona Youtube. Nofafana izany avy eo ary nosoloina iray hafa tsy ahitana tanana orohana intsony. Saingy efa tara loatra; satria efa niparitaka manerana ny vohikala ny lahatsary.
Tohina i Mohamed Ali Chebâane:
@MedAliChebaane:Andriamatoa @Moncef_Marzouki, maharikoriko ny mahita fa avelanao manoroka ny tananao ny olom-pirenena!
Moncef Marzouki Elected Interim President of Tunisia, Photo by Amine Landoulsi © Copyright Demotix (Dec 2011)
Emna Mejri nihevitra toy izany ihany koa :
@emnamejri: Henatra ho an’i Tonizia ny lahatsary ahitana an’i @Moncef_Marzouki
Nihevitra kosa ny sasany fa tsy tokony omena tsiny i Marzouki. Hamdi Gatri nisioka hoe:
@hamdigatri: Ilay nanoroka ny tanan'ny filoha no tokony omena tsiny fa tsy ny filoha. Mila fanajana sy fankasitrahana avy amintsika ny filoha, fa tsy fisolelahana sy fanompoana
Ghazi Hakim nanoratra toy izao:
@ElGueuzi Ny fanorohana ny tanan’i Marzouki no manaporofo fa tsy hahomby ny revolisiona eny an-dalana raha tsy misy ny revolisiona eo amin’ny toetsain’olona
Mpamahana bolongana Fatma Riahi (manoratra amin'ny anarana hoe Fatma Arabicca) nanontany ny filoha:
@arabicca1:‏ صدر مرسوم الباي يوم 20 جوان 1860 بمنع “تقبيل اليد” سواء من قبل الرعيّة او الضيوف وأنت وقتاش ؟
@arabicca1: Namoaka lalàna mandrara ny “oroka amin’ny tanana” na amin’ny olona ao an-tanàna, na vahiny ny Bey tamin’ny 20 Jiona 1860 – ary ianao, rahoviana?
Mpamahana bolongana Emna Ben Jemaa nampitaha an’i Marzouki tamin’ ilay mpanao didy jadona voahongana Zine El Abidine Ben Ali, tao amin’ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ela velona ny tsy fandrosoana…Ela velona Marzouki”:
Zava-nitranga tsy adinoko mihitsy fony izao mbola tao anatin’ny fahatanorana tanteraka:
Vao vita ny kabary nataon’ i Ben Ali tamin'ny 7 Novambra 1987, nanomboka nihiaka ny vahoaka hoe “Ho Ela Velona i Ben Ali!” Nihomehy izy tamin'izany ka nilaza tamin'ny vahoaka hoe, “Tsia, lazao hoe Ho Ela Velona i Tonizia!”
Fotoana fohy taty aoriana, tsy vitany hoe lasa zatra izany fiteny izany izy fa hitako ihany koa fa somary hafahafa izy raha tsy midera azy ny vahoaka.
Soa ihany fa afaka tamin'ny mpanao didy jadona sy ny fombany isika, ary mpikatroka ho an'ny zon'olombelolna ankehitriny no filoha VONJIMAIKA antsika. Saingy…ity no hitako tao amin'ny lahatsary:
Nidina nifanakaiky tamin'ny vahoaka i Marzouki, ny sasany nihiaka hoe “ho ela velona ny filoha, ho ela velona i Marzouki!!!” Tsy nanao na inona na inona izy anefa; fa nihomehy am-pireharehana fotsiny.
Fa ny tena ratsy indrindra dia ny nanomezany ny tanany mba orohana? Kanefa i Ben Ali aza nahalala nanifika ny tanany raha misy olona mikasa hanoroka izany. Oroka amin'ny tanana???
Inona indray no tranga vaovao hiseho?
Anjarantsika ve ny hiaina ao anatin'ny tsy fandrosoana?